Workflows: Maitiro Akanaka Kwazvo Ekushandura Dhipatimendi Rekushambadzira Yanhasi | Martech Zone
Mune zera rekushambadzira zvemukati, mishandirapamwe yePPC uye nharembozha, zvishandiso zvekare sepeni nebepa hazvina nzvimbo munzvimbo yanhasi ine simba yekushambadzira. Nekudaro, nguva uye nguva zvakare, vatengesi vanodzokera kuzvishandiso zvechinyakare zvemaitiro avo akakosha, vachisiya mishandirapamwe iri panjodzi yekukanganisa nekusataurirana zvisirizvo.
Kuita otomatiki workflows ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekubvisa kusakwana uku. Nezvishandiso zvirinani zviripo, vatengesi vanogona kunongedza uye kugadzirisa avo anodzokorora, mabasa akawandisa, vachideredza njodzi yezvikanganiso uye kugadzira dziviriro mambure ekudzivirira magwaro kubva mukurasika mubhokisi rebhokisi. Nekudzikisira mafashama ekushambadzira, vashambadzi vanowana maawa kumashure muvhiki ravo kuronga uye kuita zvakadzama mushandirapamwe nekukurumidza zvakanyanya.
Automation ingori nyore kutanga poindi yekusundira zvakajairika zviitiko, kubva kune yekugadzira pfungwa kuongororwa kusvika kubhajeti mvumo, mune ramangwana. Nekudaro, hapana shanduko isina matambudziko ayo. Aya ndiwo maviri eakanyanya ekurwadziwa mapoinzi masangano anosangana kana achifambira mberi neefoodflow automation, uye kuti vashambadzi vanogona kufamba sei vachivatenderedza.
Dzidzo: Kubudirira kutora yekufambisa otomatiki tekinoroji zvinoenderana nekuve nerutsigiro rwebazi rakazara (kana, sangano). Inovandudza tekinoroji - uye otomatiki kunyanya - yakonzera kunetsekana nezve kuchengetedzeka kwemabasa kubva pakuchinja kwemaindasitiri. Kushushikana uku, uko kunowanzo simuka kwete kubva kune tekinoroji asi kubva nyore kutya kwezvisingazivikanwe, kunogona kukanganisa kutorwa isati yatanga. Vatungamiriri vanowedzera kushambadzira vanodzidzisa zvikwata zvavo nezvekukosha kweotomation, zvichave nyore kudzikisira kushushikana kweshanduko Pakutanga kwemaitiro edzidzo, otomatiki inoda kuiswa sechigadzirwa chinobvisa zvinhu zvisingafadzi zvemabasa evashambadzi. , kwete semuchina unotsiva munhu wacho. Basa reMotomation ndere kubvisa mabasa akaderera semaketani marefu eemail panguva yese yekutendera. Role-yakatarwa kuratidzira kana zvikamu zvekudzidzisa ndeimwe nzira yekurega vashandi vazvionere vega nzira dzinozovandudza zuva ravo rebasa. Kuenzanisa iyo nguva nekuedza kwevashandi vanozochengetedza pamabasa akajairwa senge kuongorora maitiro ekugadzira kana kubvumidzwa kwechibvumirano kunopa vashambadzi nzwisiso yakajeka yekuti tekinoroji inochinja sei zuva nezuva.
Asi dzidzo haigone kupera nehafu-yezuva musangano kana kudzidziswa. Kubvumira vashandisi kuti vadzidze pamadanho avo pachavo kuburikidza ne-on-one coaching sessions uye zvishandiso zvepamhepo zvinopa simba vashambadziri kutora basa rekutora. Pachinyorwa ichocho, vashambadziri vanofanirwa kuve vanobatanidzwa zvakanyanya pavanogadzira zviwanikwa izvi. Kunyange danho rekuenda kudigital ringauye kubva kumusoro kumusoro uye iro department reIT rinogona kunge riri iro rekuvandudza mafashama evashambadzi, vashambadzi vanozopedzisira vaziva kwavo mashandisiro emakesi uye chirongwa chinoda zvakanyanya. Kugadzira zvishandiso zvekudzidza zvinoenderana nezviitiko zvakatarwa nedhipatimendi rekushambadzira pachinzvimbo cheiyo jargon zvinopa vashandisi vekupedzisira chikonzero chekuwedzera mari mukuedza kwekugamuchira.
Maitiro Akajekeswa: Iwo "marara mukati, marara kunze" mutemo unoshanda chose kune workflow automation. Kugadzira yakatyoka kana isina kutsanangurwa manyorero maitiro haigadzirise iri kukonzera nyaya. Pamberi pekufambiswa kwemabasa kusati kuverengerwa, madhipatimendi ekushambadzira anofanirwa kukwanisa kuita maitiro avo kuti ave nechokwadi chekuti mabasa ekutanga anokonzeresa zviito zvakateerana. Nepo makambani mazhinji achinzwisisa mafambiro avo ekushambadzira mune zvakajairwa, maitiro aya anowanzo sanganisira akati wandei anoita kunge madiki matanho anotorwa kurerutswa uye anowanzo kanganikwa panguva yekuchinja kwedhijitari Semuenzaniso, madhipatimendi ekushambadzira anowanzo tsvaga akawanda kopi edhiza pane chimwe chidimbu chechibatiso pamberi. kuenda kuchikamu chekudhinda. Nekudaro, matanho anotorwa ekusaina kusaina uye mapato anobatanidzwa mukugadzirisa anogona kusiyana zvakanyanya pamadhipatimendi mazhinji. Kana vashambadziri vachikwanisa kuenzanisa yakasarudzika maitiro ebasa rega rega saka kumisikidza mafambiro ebasa iri nyore maitiro.
Kushandura chero bhizinesi maitiro kunoda nzwisiso yakadzama yematanho, vanhu, uye hutongi hunobatanidzwa kuti zvidzivise kusanzwisisika uko kunogona kukanganisa zvakashata mhedzisiro. Sezvo tekinoroji yekufambisa inoiswa mukuita, vashambadziri vanofanirwa kuve vanotsoropodza mukubudirira kwekushanda kwemaitiro otomatiki achienzaniswa neavo vavanoshanda navo. Mune akanakisa-mamiriro ezvinhu, kufambiswa kwemabasa otomatiki inzira yekuedzesera iyo inobatsira ekushambadzira madhipatimendi kugara achivandudza.
Kugadzira otomatiki kufambiswa kwemabasa kunogona kuve iko kwekutanga kweshanduko hombe yedhijitari mukati mebasa. Madhipatimendi ekushambadzira anowanzoitirwa kubatwa nekudzora uye kusakwana kwemabasa ekufambisa ichisiya nguva shoma yekuronga mushandirapamwe uye kuita. Otomatiki, kana akanyatsorongedzerwa nekuitwa neruzivo ruzere rwematambudziko anogona kumuka, inhanho munzira kwayo. Kamwe kufambiswa kwemabasa paachange aripo uye achimhanya mushe, vashambadziri vanogona kutanga kunakidzwa nekuwedzera kugadzirwa pamwe nekubatana kunouya neakatsanangurwa otomatiki workflows.
SpringCM Workflow Dhizaini
SpringCM Workflow Dhizaini inopa ruzivo rwevashandisi vemazuva ano kumisikidza mafirifomu ezviito zvakatorwa pane faira, dhairekitori, kana kunyangwe kubva kumasisitimu ekunze seSalesforce. Shandura mabasa ekutungamira, tora kufambira mberi kwekufambiswa kwemabasa, kana tag zvinyorwa uye mishumo. Semuenzaniso, iwe unogona kugadzira mitemo yekumisikidza yega gwaro kana boka rezvinyorwa zvinoenderana kune yakatarwa dhairekitori. Kana kutsanangura zvinotsvaga, zvetsika mamaki ayo anowirirana neCustomer Relationship Management (CRM) masystem uye otomatiki anobatanidza kune mamwe magwaro kubatsira mukutevera uye mukuzivisa.
Mitemo Yakangwara inobvumidza iwe kuti uite yakakosha maitiro otomatiki uine mashoma kana asina kukodha. Rongedza nzira zvibvumirano kana zvinyorwa kune vanhu vari mukati kana kunze kwechikwata chako. Yepamberi yekufashukira kwemabasa inonyanya kukosha panguva yechibvumirano kana gwaro rekugadzira paunogona kushandisa dudziro yakatarwa kudzikisira kukanganisa kwevanhu, otomatiki kugoverwa kwekubvumidzwa, uye yekuchengetedza zvinyorwa zvakagamuchirwa zvine mashoma mashandisirwo emushandisi.
Kutsvaga kwakaringana kunoita kuti vashandisi vakurumidze kutsvaga pasi gwaro nekutsvaga metadata senge chibvumirano chekutanga zuva kana zita remutengi. Iwe unogona kutsanangura maitiro ekumaka magwaro zvinoenderana nezvinodiwa zvavo zvebhizinesi. Aya ma tag anogona kuenderana nemaCRMs ekuchengetedza zvikwata zvekutengesa zvichishanda pamwe chete nedhata revatengi uye vanogona kubvisirwa kuteedzera makondirakiti ane zvisiri-zvakajairika kana zvikamu zvekutaurirana.
Tags: otomatiki workflowsCRMmutengi wehutano hwehukamakushambadzira kune simbamarketing automationkushambadzira kufambiswa kwemabasasalesforcesalesforce workflowchitubucmyekufambisa otomatiki tekinorojiWorkflows
Maitiro Ako Kugamuchira Kwako Kunogona Kubata SEO Yako